LibreOffice 6.3 ikozvino yavapo. Izvi ndizvo zvinhu zvitsva zvehofisi suite | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 6.3 yave kuwanikwa kurodha pasi neakanaka nhau
Iyo Gwaro Sisekelo nhasi yazivisa LibreOffice 6.3. Nhengo itsva iyi yebazi 6 inotivimbisa kuita zvirinani, nhamba hombe yezvinhu zvitsva uye zvakagadziriswa, nekubatana kukuru pamwe nemhando dzezvinyorwa zvemapepa.
LibreOffice 6.3 ikozvino yavapo. Ndezvipi zvakagadziriswa
Vagadziri vacho vanovimbisa kuvandudza kukuru mu izwi processor uye kuita kwespredishiti. Kuti vaite izvi, vakakumbira vashandisi kutumira mafaera avo. Izvi zvaisanganisira: zvinyorwa zvemafaira zvine mabhukumaki akasiyana, akaiswa matafura uye mafonti, mahombekombe makuru eODS / XLSX, uye maCalc mafaera ane VLOOKUP. Nekuda kweizvozvo, mashandisiro akakwanisa kupa nekukurumidza uye pepa rekushandisa kuchengetedza mafaira muXls fomati nekukurumidza
LibreOffice 6.2 yakatiunzira nyowani mushandisi interface. NotebookBar, yave kuwanikwa kune Munyori, Calc, Impress uye Dhirowa. Iyi interface inosiya yakawanda nzvimbo yemushandisi zvinyorwa, maspredishiti uye mharidzo pamabhuku ekunyorera
wide skrini. Zvakare, iyo nyowani yemamiriro ega mushandisi interface yakagadzirira Munyori uye Dhirowa
Muchirongwa cheCalc spreadsheet, tinowana widget yekudonha-pasi mubhaini yefomula iyo inotsiva chishandiso chekare cheSum, ichibvumira mushandisi kuwana nekukurumidza kune anonyanya kushandiswa mabasa. Zvakare, imwe nyowani. Kune rimwe divi, iro basa reFOURIER rakawedzerwa, kuverenga iyo yakasarudzika Fourier shanduko yematriki ekuisa.
Iko kugona kusevha mafaera mu pdf fomati izvozvi zvinosanganisira kuenderana neiyo PDF / A-2 yakajairwa. Iyi fomati inosarudzwa nemasangano mazhinji kwenguva yakareba zvinyorwa zvinyorwa.
Se Ini ndinorerutsa dhizaini inogadzirisika mafomu ePDF kuwedzera mafomu menyu kune izwi processor.
Zvino zvinogoneka bvisa ruzivo rwakashata kubva kumagwaro usati wagovera kubatsira makambani kutevedzera zvirevo zvakavanzika.
Yakagadziridzwa munzira dzinoverengeka tsigiro yemafomati epfuma ikusanganisa kutumira kunze kweDOTX uye XLSX zvinyorwa zvematemplate, kuendesa kwemifananidzo kubva kuDOCX kudhirowaML, maumbirwo eboka, SmartArt kupinza / kutumira kunze kubva kumafaira ePPTX, kuchengetedza PowerPoint kugadzirisa, uye kudyidzana kuri nani kwetafura yeXLSX pivot.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » LibreOffice 6.3 ikozvino yavapo. Idzi ndidzo nhau